सन्तोष पौड्याल - मैले साथीको साईनो लाउँदा
रोटी-बेटीको गीत गाउँदा
के पो गरेनौं तिमी?
मेरो खाना खाने थाली खोस्यौ
सुस्ताको खेतबाली खोस्यौ
मेरो घाँटी सुकाएर महाकाली खोस्यौ।
राकेश कुमार रसिक - जनता ठग्नेको स्तर हुँदैन
देश लुटने अमर हुँदैन
सबै मानव शिखर हुँदैन
मर्ने कसैलाइ रहर हुँदैन।
सरल गुरुङ - फाेन उठाउने महिला कर्मचारीले मेराे परिचय मागिन मैले नाम बताए । उताबाट एक्कासी ठुलाे ठुलाे आवाजमा गाली बर्सियाे । साधारण मान्छेलाई एयरपाेर्टकाे माैसम बारे भन्न मिल्दैन उनकाे जवाफ थियाे । उनले झन चर्काे स्वरमा गाली गर्दै फाेन राखिन ।मैले दाेहाेर्याएर फाेन गरे, यस पटक पुरुष कर्मचारीले फाेन उठाए ।
उनले थपे सर्वसाधारण भएर विमानस्थलमा फाेन गरेर माैसम बारे साेध्ने ? याे अप्रेसन सेन्टर हाे, माैसम बारे भन्न मिल्दैन सर्वसाधारणलाई । उनले मलाई चेतावनी दिए - तिम्राे नम्बर कारवाही सुचिमा राख्छु । म छक्कपरे, विमानस्थलकाे वेवसाईटमा राखिएकाे सार्वजनिक नम्बरमा फाेन गरेर माैसम बारे साेध्दा अपमान र कारवाही ! मन मानने, मैले तुरुन्तै विमानस्थलका प्रमुख देव अानन्दलाई फाेन लगाए, हलुका जवाफ अायाे, म बुझ्छु ।
पार्वती घिमिरे पन्त - गल्ती जो कोहीबाट जुनसुकै स्थानमा जसरी पनि हुन जान्छ। जानेर गरिएको गल्ति क्षमायोग्य हुँदैन। अन्जानमा गरिएको गल्ति माफीको लायक हुन्छ।
केही समय अगाडि नेपाली चलचित्र जगतकी नायिका सुवेच्छा थापाले चर्चाका लागि बौद्ध धर्माबलम्बीहरुको पवित्र मानिने खादाले यौनांग ढाकेर फोटोसुट गरिन्।
जसका कारण नेपाल चलचित्र कलाकार सघंले उनलाई ६ महिनासम्म चलचित्र सम्बन्धि कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागी हुन नपाउने गरी निलम्बन गरेको छ।
जुन गर्नैपर्छ। यो अत्यन्तै स्वागतयोग्य कार्यको थालनी हो। यस्ता कार्यबाट गल्ति पुन:दोहोरिने मौका कम हुदै जान्छ। आज चलचित्र जगतमा मात्र होइन अन्य विविध क्षेत्रमा कारबाहीको उतिकै आवश्यक छ।
राम ढुंगाना - अर्थमन्त्रीको मुख्य काम देशलाई विकाश र आर्थिक रुपमा अघि बढाउनु हो। देश विकाशको मुख्य साँचो अर्थमन्त्रीकै हातमा हुन्छ।
२०४६ सालपछि पटक- पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका रामशरण महतलाई बेलायती पत्रिका द बैंकरले 'एसिया प्रशान्त क्षेत्...
सरोज केसी - समयको महत्व सापेक्षिक हुन्छ तर मात्रै १० मिनेटले यस्तो होला भन्ने मैले कल्पना गरेको थिइनँ।
पौष १४ गतेको कुरा हो। दिउँसोको २ बजेर ४६ मिनेट जाँदा म त्रिपुरेश्वर कर कार्यालयमा रहेको एभरेष्ट बैंकको काउन्टरमा पुगेको थिएँ। पैसा जम्मा गर्नु थियो। ...
आशिष दुलाल - तप्प चुहिन्छ शित त्रिपालबाट काँडा उम्रको जिउमाथि,
भुराहरू ज्वरोले थलिएका छन्,
चिसोले पाल बाहिरको आगो ननिभाउँदै भोकले बाल्दैछ आगो।
एकसरो लुगाले लुगलुग छिन भोटेनी दिदी
सायद जुट्दैछ न्यानोपन सिंहदरबारबाट, सायद फुटेकै यसैका लागि मन्त्रालय।
इज्मा पोखरेल - बालिका हुँदा नै ,
बाबुआमाले पुण्य कमाउन,
दुलही बनेकी मेरी आमा!
खाउ खाउ र लाउ लाउको उमेरमै
सिन्दुर अनि गलाको पोते चुडाएर,
श्रीमानको प्रेम बिना नै बाचिन् !
चिनो , गर्वमा हुर्किदै गरेकी म ।
आफ्नो पेट पाल्नको लागि ,
नदी किनारमा गिट्टी क...
कृष्णराज खनाल - ओवामालाई सनातन धर्म देखाएर के भो ?
सिन्जो आवेलाई गीता बाँडेर के भो ?
एउटा असल छिमेकीलाई
ढाडमा छुरा हान्छौ भने
तिमी ढोँग सिवाय केही होइनौ
तिमी फगत मोदी हौ
तिमी काला मनका धनी रहेछौ ।
युवराज काफ्ले, इटहरी - मन्दिरले नि प्रेम बोल्छन्
मस्जिद पनि प्रेम नै बोल्छन्
चैत्यले नि प्रेम बोल्छन्
गुम्वा पनि प्रेम नै बोल्छन्
तामा तुलसी पित्तल सधै
देवल पाटी सत्तल सबै मात्र प्रेम, प्रेम बोल्छन् ।
वाईवलले नि प्रेम बोल्छन्